बेला-बेलामा पेट बाउडिन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो समस्या - GyanBigyan
पेटमा ग्यास भरिने, कब्जियत हुने, पखला लाग्ने जस्ता समस्यालाई हामी सामान्य ठान्छौ। कतिपय अवस्थामा यी सामान्य पनि हुन्। खानपान र दिनचर्या नमिल्दा यस्ता समस्या उत्पनन हुनसक्छ। तर, सधै यहि अवस्था रहिरहेमा ? यो अवस्था निरन्तर रहेमा सर्तक हुनैपर्छ। किनभने यसले के संकेत गर्छ भने, ठूलो आन्द्रामा कुनै न कुनै समस्या छ।
यसकारण हुन्छ: आइबीएसको निश्चित कारण अझै थाहा हुन सकेको छैन। यद्यपि, आन्द्राको मांसपेशीले राम्ररी काम नगर्दा यस्तो समस्या निम्तने गर्छ। आन्द्राको असाधारण खुम्चने प्रक्रियाकै कारण आन्द्राले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र पेट दुख्न थाल्छ।
कसरी थाहा पाउने ? इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम पेटसित सम्बन्धित समस्या भएकोले यसबारे जान्न निकै जरुरी छ। किनकी शरीरमा देखा पर्ने कयौ रोगको पनि यस्तै लक्षण हुने गर्छ।
उपचार विधि: इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको उपचार सरल छ। तर उपचारद्धारा यो रोग तथा यसका कारण हुने रोगको उपचार हुन भने पक्कै समय लाग्छ।
यो रोग लागेमा सन्तुलित तथा पौष्टिक आहार खान तथा नियमित रुपमा खान चिकित्सकहरु सल्लाह दिने गर्छन्। यस्तो समस्या भएमा न त एकैपटक धेरै खानु हुन्छ, न त कम। ज्यादा समय भोकै बस्नुले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै यस्तो समस्या भएमा जंकफुडबाट टाढै बस्नुपर्छ। फाइबरयुक्त आहारको सेवन उचित मानिन्छ।
इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोममा विरामीलाई तनाव समेत हुन सक्छ, जसका कारण यो समस्या गम्भीर बन्न सक्छ। त्यसैले , इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भएमा तनावबाट राहत पाउन निकै जरुरी छ।
Don't Miss it बाथ रोगले आत्तिएका व्यक्तिले छुँदै नछुनुहोस् यस्ता खानेकुरा, नत्र जोर्नीको दुखाईलाई झन् बढाउँछ
Up Next कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुभयो ? केही दिन मेथिमा दही मिसाएर लगाउनुहोस्, देख्नुहुनेछ चमत्कार
4 months ago 2356 Views
प्रत्येक दिन, एक व्यक्ति केहि रोग बाट पीडित भएकै हुन्छ जसको कारण हरेक व्यक्ति दुखी हुन्छन्। र यही कारण हो…
4 months ago 1016 Views
अनुहारको दाग धब्बा हटाएर अनुहार चम्किलो र गोरो बनाउने घरेलु उपाय यस्तो छ ! जानी राखौं
अनुहारको छाला निकै नै संवेदनशील हुन्छ । मानिसलाई पहिलो नजरमा हेर्दा, अनुहारमा ध्यान जाने हुनाले मानिसहरु आफ्नो अनुहारलाई सुन्दर र…
8 months ago 911 Views
मानिसहरूलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रार्थनाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्दछ। विहान उठेर हत्केलाको दर्शन गर्नाले हुन्छ दिन नै शुभ। हाम्रा…
कपाल र सौ’न्दर्यको लागी वरदान हुन्छ चौलानी पानी, यसरी गर्नुहो’स् प्रयोग
चामल धोएको पानी हामी त्यसै नै खेर फाल्ने गर्दछौं तर चौलानी पानीमा हाम्रो शरिरको लागी लाभदायक गुणहरु हुँने गर्दछ ।…
महिलाहरूले राती यस्ता काम गर्नुहोस्, घरमा सधैँ हुन्छ लक्ष्मीको बास
महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ। महिला जसको घर जान्छिन् त्यस घरको परिवारको भाग्य र सफलता उनीसँग जोडिएको मानिन्छ । तर ज्योतिष…
गाढा हरियो रंगको तुलसी जस्तै स–साना पात हुने पुदिना वा पतिना प्रायः चटनी वा अचारको रुपमा खाने गरिएको वनस्पति हो…
9 months ago 862 Views